FAQs - Baiyiju Smart Kumba Technology (Jiaxing) Co., Ltd.
Beajom isarudzo inonyatsoita mutsauko wezvigadzirwa zvako & kambani, Tinoita zvese zvatinogona kuti tione kuti kubatana neBeajom kwakakodzera uye kwakaringana, tinoda kugovana zvimwe zvakakosha uye ruzivo rwekuti nei uchifanira kusarudza Beajom sekureba kwako -term mutengesi:
Imwe-mira mhinduro mudiwa.
Isu tinomhanyisa mafekitori, asi isu hatisi chete mugadziri, anopfuura makore gumi nemaviri achishanda nesimba uye tichirima mufekitori indasitiri & makore masere kurodza mumusha michina nzvimbo, tinonyatsonzwisisa indasitiri yese nemusika, tinogara kudivi rimwe chete petafura sevatengi vedu kupa mhinduro kune zvavanoda zvine chekuita nezvinetso zvebhizinesi. Kuedza kukutengesera zvimwe zvigadzirwa hachisi icho chinangwa chedu chikuru, tinokuteerera, tinoshuvira kunzwisisa zvirinani zvaunotarisira, tarisa zvaunokoshesa uye nekugona kupa mhinduro dzakanangana nechero zvido zvako nekuwedzera kukosha.
Yakavimbiswa Hunhu Kudzora.
Inotariswa nedzimwe nyika ISO9001 & ISO14001 manejimendi sisitimu.
Yakanyatsodzidziswa ne5S manejimendi.
Mushure mekushandurwa kwemaindasitiri 4.0, kutonga kwedu kwemhando yepamusoro kwasvika padanho nyowani iro riri pamusika.
isu tinoshandisa sisitimu iyo zvigadzirwa zvemhando yepamusoro zvinogadzirwa zvine hungwaru kusvika kudiki kwazvo.
Mushure meindasitiri 4.0 shanduko, yedu yekugadzira kugona yakawedzera kaviri. Uye hausi iwo muganho wekugona izvozvi, zvinoreva kuti isu tinogona kupa zviri nani kuendesa kana chiri chinokurumidza mamiriro, kunyangwe yedu yenguva yekuendesa nguva semazuva makumi matatu inokwezva kwazvo kune vatengi vazhinji.
Ticharova chero mutengo waunowana, kukubatsira iwe kuti uwane kukosha kwepamusoro nekutenga kumafekitori edu.
Global vatengesi cheni.
Mhando dzakasiyana dzesarudzo ndiro simba redu guru.
Fekitori yedu yeVietnam iri kuvakwa, uye iri chokwadi kushanda muna Kubvumbi, 2021.
Yedu Taiwan chirimwa chechitubu chemetiresi mutsara iri kushanda mushe uye inogona kuwedzerwa chero nguva kana zvichidikanwa.
Isu takagadzirira kupa zvirinani zvitengeswa zvevatengi vedu vepasirese-vatengi, kuvabatsira kubata nemamiriro ezvinhu akaomesesa ekutengeserana epasi rese nemhinduro dzepasi rose.
Nguva dzose basa rakakura revatengi & zvigadzirwa zvinogara zvakanaka.
Isu tinosvitsa sevhisi zvakanaka nekubatanidza vanhu vakanakisa nehunyanzvi hwetekinoroji. Vanhu vedu vakarovedzwa kune epamusoro indasitiri zviyero uye vakapihwa mubairo wekuendesa iwo akakwira zviyero kune edu mutengi akawandisa indasitiri ruzivo uye kuenderera kudzidziswa muazvino tekinoroji, maitiro akanakisa eedu ese masisitimu achange ari kuratidza mune ese mutengi kudyidzana.
Nguva dzose basa rakakura revatengi & zvigadzirwa zvinogara zvakanaka, ndicho chivimbiso chedu, sekuvandudzika kwedu kuri kuramba kuripo.
Isu tiri kambani inotarisana nevanhu.
Kunyangwe tiine michina yakawanda kudaro, zvishandiso uye zvemhando yepamusoro zvekugadzira tambo masisitimu, hatizovapo pasina vashandi vedu, vatengi vedu nevatapi vedu.
Unogona kuvimba nesu kana uchishanda naBeajom, kuti utende kuti pasina bhizinesi maitiro uye hunhu, hatife takakwanisa kushandira vatengi vedu kwenguva yakareba. Tinogona kuita imwe mari, asi hatife takakura kana zvakadaro. Ndosaka tichitaura zvinotevera kune vatengi vedu.
Vimba neruzivo rwedu.
Vimba zvigadzirwa zvedu.
Vimba nemabhizinesi edu maitiro.
isu tiri kugara tichiedza kukwidziridza kukosha kwevanhu vedu uye vatengi vedu nekuvandudza Beajom sevhisi system.
Kana uchisarudza vanogadziridza vatengesi vemubhedha kana vamwe vatengesi vechigadzirwa, mutengi mumwe nemumwe anofanira kunyatsoongorora kambani Tinovimba kuti kubudikidza neiyi kutaura, tinogona kukubatsira iwe kuita sarudzo kwayo.
Ndapota taura nesu pese paunoda iwe!